SoftGuide – Web Development & Sales,Service
Content Managemnet System ကို အေျခခံ၍ ဆန္းသစ္ေသာ template မ်ား ၊ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိေသာ theme မ်ားျဖင့္ website အား ဖန္တီးေပးျခင္း
Google Map နှင့် Facebook ပေါ်တွင် မိမိတို့၏လုပ်ငန်း တည်နေရာနှင့် အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပေးခြင်း
မည်သည့် device တွင်မဆို ၊ မည်သည့် screen အမျိုးအစားတွင်မဆို ကြည့်ရှု၍ အဆင်ပြေနိုင်အောင် ရေးဆွဲပေးခြင်း
“ငယ်စဉ်ကပင် ကွန်ပျူသင်၊ ကြီးလျှင်ထူးချွန်မည်” တကယ်တတ်မြောက်စေရန် တစ်ဦးချင်း စက်တစ်လုံးစီဖြင့် သင်ကြားပေးပါသည်။
Founded in 1992, Soft Guide Co., Ltd. is specifically dealing with Web Development, Software, Domain and Hosting, Language Lab, Sales, Services and Training.
More than 1,000 students per year receive training and seek information from us regarding overseas education, with its long standing tradition and know-how. More than 300 schools and universities install Language Lab for multimedia programs through us.
We create the business and organization websites for Myanmar and other country. We sell the domain and hosting cheaply. We focus on quality and cost-effective solutions
To transfer modern IT knowledge to Myanmar people.
To provide world class IT education to Myanmar people.
To cooperate with international organizations for development of the IT industry in Myanmar.
To develop web technology in Myanmar.
MOE Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး Website ဖြစ်သည်။ ပညာရေးသတင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြနေသည်။ ပညာပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံ့သားကောင်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပေါ်ထွန်းလာရေးကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်ကျောင်းများရှိ ဆရာ/ဆရာမများ၏ ပညာသင်ကြားမှု ကောင်းမွန် တိုးတက်စေရေးသို့ ရှေးရှု၍ ပညာမင်းကြီး၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ဖြင့် "ပညာတန်ဆောင်" သည် နိုင်ငံတော် တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ နိုင်ငံတော်ကျောင်းများနှင့် အသိ အမှတ်ပြုကျောင်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးကိုရှေးရှု လျက် ထုတ်ဝေသော စာစောင်ဖြစ်ပါသည်။
SATT YANGON သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ SATT ၏ ရုံးခွဲဖြစ်ပါသည်။ IT သင်တန်းကို အဓိကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ လူသားရင်းမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုုကို အဓိကထားသော ပညာရေး နယ်ပယ်ကနေ ဖောက်သည်တွေရဲ့ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
“Get started for website. Please choose our website package.”